I-china Wholesale 3 Vislon head othomathikhi abahlinzeki nabakhiqizi - GRX GARMENT (HONG KONG) CO., LTD.
Ikhaya > Ikhanda le-zipper > Zinc ingxubevange ikhanda okuzenzakalelayo > 3 Inhloko ye-Vislon ezenzakalelayo
Leli khanda elizenzekelayo le-3 Vislon ikhanda lenziwe nge-alloy yaseYurophu naseMelika. Le nkampani isidlulile isitifiketi sohlelo lokuphathwa kwekhwalithi le-ISO9001: 2008.
1.Ukwethulwa komkhiqizo kwe-3 Inhloko ye-Vislon ezenzakalelayo
Lokhu 3 izinyo zenjoloba ikhanda othomathikhi senziwe ingxubevange yaseYurophu naseMelika zinc. Le nkampani isidlulile isitifiketi se-ISO9001: 2008quality management system. Inamalungelo obunikazi amaningi futhi yonke imikhiqizo ibe yi-SGS futhi yahlolwa Yibeke emakethe ngemuva kokufanelekela, yethule uhlelo oluphelele lokuphathwa komkhiqizo, ithuthukise ngokuqhubekayo izinsiza kusebenza zehardware nezesoftware, futhi zilwele ukuhlala ngokulingana emakethe.
Amapharamitha womkhiqizo (Imininingwane) ye-3 Inhloko ye-Vislon ezenzakalelayo
Usayizi womgodi wangaphakathi: Ukuphakama komlomo: 2.7MM
Ububanzi bomlomo: 4.8MM
Indwangu yomthungo: 0.95MM
Umgogodla wesisekelo: 1.95mm
3. Product features and application of 3 Inhloko ye-Vislon ezenzakalelayo
4. Product details of 3 Inhloko ye-Vislon ezenzakalelayo
5. Ukufaneleka Komkhiqizo we3 Inhloko ye-Vislon ezenzakalelayo
6. Ukupakisha nokuthuthwa kwe3 Inhloko ye-Vislon ezenzakalelayo
Amathegi ashisayo: Inhloko ezenzakalelayo ye-3 Vislon, China, Wholesale, Bulk, Suppliers, Manufacturers